၂၀၁၂ မှာ နောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့သောရုပ်ရှင်မှာ 'The Tale of Despereaux' ဆိုတဲ့ ကာတွန်းကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒတ်စပရိုဒ်လို့ အမည်ရတဲ့ မွေးကတည်းက ထူးထူးခြားခြားရဲရင့်ခဲ့သော ကြွက်ကလေးတစ်ကောင်အကြောင်းပါ။ ကြောက်တတ်အောင်သင်ကြားခံရပေမယ့် ရဲဝံ့စွန့်စားလို့ မိဘအသိုင်းအဝိုင်းက စွန့်ပယ်ခြင်းခံရပေမယ့် သတ္တိမလျှော့ခဲ့သော ကြွက်ကလေးရယ်လေ။ ချိုမြတဲ့ပုံပြင်တွေထဲက မင်းသားလေးတွေလိုမျိုး ဘုရင့်သမီးတော်လေးကို အသက်ဘေးရန်က စွန့်စားကယ်တင်ခဲ့သော ကြွက်ကလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မ သဘောအကျဆုံးအခန်းကတော့ မင်းသမီးလေးနှင့် ဒတ်စပရိုဒ် စတင်တွေ့ဆုံချိန်မှာ မင်းသမီးလေးက ‘Are youamouse?’ လို့မေးတော့ ဒတ်စပရိုဒ်က ‘No,I’magentleman.’ လို့ ပြန်ဖြေချိန်ဖြစ်ရဲ့။ gentleman လူကြီးလူကောင်းတဲ့လား။ ကြည့်ပါဦး။ ကြွက်ကလေးက လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ချင်တယ်တဲ့။ သဘောတကျပြုံးမိပေမယ့် လည်သူစားစတမ်းခေတ်အကြောင်းတွေးမိတော့ မရွှင်လန်းနိုင်တော့ပါဘူး။ လူကြီးလူကောင်းဆိုတာ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ ရှိရမှာလဲ။ မွန်ရည်သောအမျိုးကောင်းသားဆိုသော ဘာသာပြန်ချက်တစ်ခုတည်းနှင့်တော့ မလုံလောက်ပြီပဲ။ စာရေးဆရာ မူရာကာမိရဲ့ နော်ဝေရဲ့တောအုပ် (Norwegian Wood by Haruki Murakami) စာအုပ်ထဲမှာ လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ချင်တယ်လို့ ဇာတ်ကောင် နာဂါဆိုဝါက ပြောခဲ့ဖူးတာကိုလည်း အမှတ်ရနေဆဲ။ စာအုပ်ထဲက စကားပြောခန်းတစ်ခုမှာ လူကြီးလူကောင်းဆိုတာ လုပ်ချင်တာကို မလုပ်ဘဲ၊ လုပ်သင့်တာကိုလုပ်တာလို့ နာဂါဆဝါကတဆင့် မူရာကာမိက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
လူ့လောကမှာ အမြင့်ကို သူဘယ်မျှတက်လှမ်းနိုင်ကြောင်း စမ်းသပ်ချင်ခဲ့သော၊ မိန်းကလေးပေါင်း အယောက် (၇၀) ကျော်နှင့်အိပ်ခဲ့သော၊ သူ့ကို အသက်ထက်ပိုချစ်သော မိန်းကလေးကို ထားရစ်ကာ ဘဝတက်လမ်းကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့သူ နာဂါဆာဝါဟာ ပညာတတ်လူရည်လည်ဥာဏ်ရည်မြင့်သူ လူကုံထံတစ်ယောက်မျှသာလား။ စိတ်နေမြင့်သူ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာဦးမှာလား။
အဲဒီစာတမ်းရဲ့စာမျက်နှာသုံး မှာ Herold and Milhausen (1999) က လေ့လာချက်အရ အမျိုးသမီးတွေဟာ သဘောကောင်းဖော်ရွေသော ယောက်ျားလေးတွေကို ယောက်ျားမာန်ချို့တဲ့သော၊ အားနည်းသော၊ ခန့်မှန်းရလွယ်သော၊ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော၊ အတွေ့အကြုံမရှိသော၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနည်းသော၊ ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော ယောက်ျားများလို့ မှတ်ထင်ကြပါသတဲ့။ ယောက်ျားလေးတွေကလည်း မိန်းမကောင်းဆိုသူများကို ထိုသို့ပင် တွက်ဆလေ့ရှိကာ မိန်းမဆိုးများကိုသာ နှစ်သက်သဘောကျလေ့ရှိပါသတဲ့။ဒါကြောင့်လည်း Why Women Love Jerks ? Why Men Love Bitches? ဆိုသော မေးခွန်းတွေ ပေါ်ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ခက်တာက ထိုနှစ်သက်စိတ်ကူးယဉ်မှုများဟာ အချစ်တစ်ခုထဲမှာသာမက လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအားလုံးအပေါ်မှာပါ အကျုံးဝင်နေသလားလို့ တွေးဆမိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ရှုခင်းမှာ လူစုလူဝေးလိုက် ကြည်ညိုသဒ္ဓါပွား ညွတ်တွားခယခံနေကြသူများမှာ လူကြီးလူကောင်းဆိုသူများမဟုတ်ဘဲ လူပေါ်လူဇော်များသာ။ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမှုများကိုသာ သြဘာပေးကြ၊ လက်ခုပ်တီးကြ၊ ချီးကျူးထောက်ခံကြတဲ့ ကာလ။ တိရစ္ဆာန်တွေလိုပင် အင်အားကြီးသူက အင်အားနည်းသူသတ်ဖြတ်စားသောက်နေကြမှုများကလည်း မမြင်ချင့်အဆုံး။ လူယုတ်မာများကိုသာ အောက်ကျို့တတ်သော၊ ယုံကြည်မှု မခိုင်မြဲသော၊ ကြောက်ရွံ့အားနည်းတွေဝေတတ်သောလူပင်လယ်ကြီးက လက်တစ်ကမ်းမှာလေ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးမှာ အနိုင်ရသူသာ အမှန်တရားအကြောင်း တရားဟောနိုင်တာမဟုတ်လား။
ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်က လူတွေရဲ့ ဓလေ့ပေါ့။ သဘောကောင်းမှုကို အခွင့်ကောင်းအဖြစ်အသုံးချမယ်။ သည်းခံမှုကို အားနည်းမှုအဖြစ်မြင်မယ်။ ရိုးဖြောင့်သူဆိုတာ ခန့်မှန်းရလွယ်သောကြောင့် နောက်ကျောက ဓားတွေကိုလက်ခံရရုံမက ရှေ့တည်တည်ကပင် အရှိုက်ထိုးခံရနိုင်တယ်လေ။ ပလီဆိခြောက်ချက်၊ ကလိမ်စေ့ငြမ်းစင်မပြောတတ်သောကြောင့် စကားများဟာလည်း ငြီးငွေ့ဖွယ်အတိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
မကောင်းမှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကို ခိုင်မာသောစိတ်သတ္တိလို့မမြင်ဘဲ အတွေ့အကြုံမရှိသော သရဲဘောကြောင်သူလို့ မြင်ကြမယ်။ တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်ပြီး ရှေ့ထွက်မရပ်ချင်သောအခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနည်းသူဟု စွပ်စွဲကြမယ်။ နှိမ့်ချသူကို ဘယ်သူကမှ ပြည့်ဝသူလို့ မထင်ဘူး။ အားနည်းချို့ယွင်းနေတယ်လို့ မြင်တယ်။ အထင်သေးနှိမ့်ချတယ်။ စော်ကားအနိုင်ကျင့်တယ်။ ဆရာလုပ်မောက်မာတယ်။ ရိုင်းစိုင်းဗိုလ်ကျသူကိုသာ ရှိခိုးဦးတင်ပူဇော်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့။
ထိုသို့သော အချက်အလက်များမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်းကျွန်မ သင်ကြားခံခဲ့ရသော ၊ နှလုံးသွေးပျက်စွာ လက်ခံလိုက်ရသော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်က ပေးသော ရွည်ရွယ်ချက်မှာ ကောင်းမွန်ပေမယ့် ရုပ်ရှင်ကပြောသလို ကျွန်မတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာရော စိတ်ထားကြီးမြင့်သော လူကြီးလူကောင်းများအတွက် ကြိုဆိုကမ်းလှမ်းနေရာပေးမှုဆိုတာရှိရဲ့လားလို့ ကျွန်မ သံသယဖြစ်ဆဲရယ်။
ဒါကြောင့် ဒီကမ္ဘာမှာ အပြစ်ကင်းအောင်ကြိုးစားအသက်ရှင်နေသူတွေအတွက် နေရာ အသေအချာရှိပါသေးတယ်လို့ အာမခံပြောလာရင်တောင် ကျွန်မ တွေဝေနေတော့မှာပါ။ ကျွန်မ မယုံနိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် လူ့သဘာဝအကြောင်း မသိသေးသော လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့ ဒတ်စပရိုဒ်လေး ကံကောင်းပါစေ။ မှန်ကန်တဲ့စိတ်ကလေး ဆက်လက်မွေးမြူနိုင်ပါစေလို့တော့ သက်ပြင်းချရင်း ဆုတောင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ။
(ညီမလေး ခင်သန္တာအောင် ရေးခိုင်းတဲ့ ၂၀၁၂ မှာ တဂ်စာရဲ့ တစ်ပိုင်းတစ်စ နောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့ဖူးသော ရုပ်ရှင်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။)
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 1/01/2013 11:47:00 PM9comments: